Gazy nirefotra toy ny baomba | news2dago |
Gazy Nirefotra Toy Ny Baomba
news2dago 07 Janoary, 2009 08:17 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Rehefa ho avy tokoa ny loza dia na ny ranovola aza mety hisy voay hoy ny fitenenana. Loza nahatsiravina no nitranga tetsy Ambodivonkely Ambohimanarina omaly tolakandro. Nisy zavatra nipoaka be no henon'ny manodidina ka samy taitra avokoa ny rehetra potoizay dia niely ny vaovao ary fantatra fa ny Garazin'i Ravonjy no nisy ilay loza. Io Ravonjy io moa dia efa ampolotaona maro no efa nanao itony soudure itony ary kinja @ fanamboarana ny vatana fiara pempo na simba sy arafesina izay. Heno ary izao araka ny loaranom-baovao fa olona 3 no namoy ny ainy tao @ ilay garazy ary ny 3 kosa dia maratra mafy ihany koa. Ilaina ihany ny tokony hanaovana fanaraha maso itony fitaovana itony fa mety hampididoza be satria maro ny garazy mampiasa an'itony.
Mbola vaky indray koa ny fonjan'Ambalatavohangy any Toamasina afak'omaly. Mametram-panontaniana ny maro oe misy zavatra tsy mazava intsony ao. Fonjan'iza indray ary ny manaraka? Ny resaka mandeha aloha dia oe ny hanakanana ny olona tsy hivorivory no tena mety tanjona @ izao fonja vaky izao satria azo lazaina fa tsy mandry ny tany! Asa anefa fa heritreritra ihany ny ahy iny.
Voatendry ho direkitera ny kabinetra ny CUA kosa ny jeneraly Rasolosoa Dolin. Miditra an-tsehatra ao koa izany ny miaramila ankehitriny. Na izany aza anefa dia mbola atody miady amam-bato ihany ny CUA raha hifampitana @ fitondrana satria itsy farany dia afaka manampatra fahefana.